Chii chinonzi PER? | Ehupfumi Zvemari
Kana iwe uri mushambadzi akanaka uye ane ruzivo, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo PER ndiyo imwe yeanonyanya kushandiswa ma parameter kuziva kana misika yezvemari zvinodhura here kana zvakachipa. Naizvozvo, chichava chidimbu cheruzivo chinoshanda pane ako mashandiro pamusika wemasheya. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinokupa iwe mitengo yakakodzera kwazvo kutora chinzvimbo mune kukosha kweakanyanya iwo masheya indices. Uye zvakare, ichave iri chikamu chehurongwa hwekudyara iyo ichakubatsira iwe kuita kunge mashoma zvikanganiso sezvinobvira. Seyakanyanya dziviriro chiyero cheako zvaunofarira.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvePER ndicho icho chinoreva izvo chaizvo zvinoreva aya mazwi auchange uchinzwa pane kanopfuura kamwe chiitiko. Zvakanaka, ndiwo mavambo echirungu e Mutengo Kuwana Ratio uye ane dudziro chaiyoiyo pakati pemutengo nepundutso. Mune mamwe mazwi, inoyera iyo chaiyo mamiriro ayo masheya ari kupfuura nemumisika yemari. Hazvishamise kuti ichatarisa huwandu hwenguva iyo iyo purofiti inosanganisirwa mumutengo wemugove. Nemusiyano wakakura pakati peimwe nehumwe hunhu uye izvo zvinoshandira kuenzanisa mamiriro ezvikamu zvaunoda kutenga kubva zvino zvichienda mberi.
Saka kuti iwe unzwisise kuti chii chinonzi PER, hapana chinhu chiri nani pane kuziva imwe chirevo chinobva pamhedzisiro pakati pemutengo wakanyorwa pakati pemubhadharo. Ichapa sechigadzirwa chiyero cheakasarudzwa masheya kukosha. Nekudaro, haisi data iro rinogara rakamira. Kana zvisiri, pane kudaro, uye semuenzaniso, kambani yakanyorwa ine yakaderera PER inogona kureva izvo stock haina kukosheswa uye inogona kuwedzera mutengo wayo munguva pfupi nepakati. Uye zvakapesana, nePamusoro PERI zvinogona kureva kuti inogona kudzoserwa mukati menguva yekugara kwehunhu hwakafanana neyakaitika nyaya yapfuura.
1 Tengesa kana kutenga nePER?
2 Maitiro ekuverenga iyo PER?
3 Makomborero mukushandisa PER
4 Kukanganisa kweiyero iyi
5 Kukanganisa pakuongorora kwehunyanzvi
Tengesa kana kutenga nePER?
Ehezve, zvimwe zvinhu zvaunofanira kuongorora neiyi yakakosha sitoko musika paramende ndeyekuti zvinokodzera here kupinda kana kubuda mumisika yemari. Kubva pane akajairika mamiriro, usakahadzika kuti a PER kumusoro, Izvo hazvireve kuti zvinoreva kuti zvikamu zvacho zvinodhura zvakanyanya, kana kuti zvakakosheswa. Zvinogona kubva pane yakatarwa nguva iyo masheya anopfuura kuburikidza nekuti haasi ese masheya anogara akakosha zvakafanana. Chidiki chekutsvagisa musoro wenyaya uyu kuenzanisa kukosha kwakasarudzwa neiko kwemamwe makambani ari muchikamu chimwe chete. Ichave iri nzira inoshanda zvakanyanya yekumisikidza mutengo wemari.
Kune rimwe divi, iyo PER ndiyo inosarudzika kukosha kuti iwe ukoshese izvo ndezvipi zvakakosha uye zvakashata zvekudyara mukambani. Kuburikidza ne ongororo yakapusa kuisa mukuita uye kusiyana nedzimwe nzira dzekudyara. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kubva zvino zvichienda mberi izvo zvambotaurwa Mutengo Kuwana Ratio Iyo imwe nzira yekudyara mari yako nekuchengetedzeka kukuru uye pamusoro pemamwe masisitimu ayo anowanzo kuve akaomesesa mumhando yavo yekuongorora. Usakanganwe izvi kana iwe usiri kuda kukanganisa kubva panguva ino zvichienda mberi.
Maitiro ekuverenga iyo PER?
Kunyangwe iyo PER iri paramende yakakosha kune vashandisi vanoshanda mumisika yequity, ichokwadi zvakare kuti dzimwe nguva kune mamwe matambudziko mukuwana iyi data. Ndokunge, hatizive huwandu hunogona kuenderana nemaaclonyms aya uye nenzira iyi tiri kurasikirwa neruzivo rwakakosha kuita mari kubva ikozvino. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kutaurwa kuti kuverenga kwehuwandu hwePR kunove nyore pane kungataridzika pakutanga. Nekuti mukuita, iri mashandiro ari nyore kuverenga sezvo inotorwa kubva pakuita nyore masvomhu kupatsanura. Iko kunongodiwa chete kupatsanura mari yemusika yekambani nemari yayo yemubhadharo. Neiyi nzira, saka, iwe unozotarisana neruzivo urwu iwe rwaunogona kushandisa chero nguva kuumba mashandiro mumisika yemari.
Ehezve, iyo PER yakanyanya kukosha kupfuura izvo zvinoonekwa pakutanga pakuona uku kushanda. Kwete pasina, achange achikupa imwe inopfuura rakarurama kuongorora yemamiriro emari ekambani maererano nemutengo, masheya uye shanduko mumusika. Hapana kana chimwezve kana chimwe chidiki, kuti iwe uri mumamiriro akakwana kuti uite sarudzo yako pane chero index kana yemari nhumbi. Nekudaro, iri mumusika wemasheya uko kunoshandiswa kwayo kuri kukuru sezvo paine varimari vadiki nepakati varimi vanotora iyi poindi yekusimbisa kusimbisa yavo sarudzo. Pamwe pamwe nemamwe manhamba ekuongorora kwehunyanzvi ayo anokupa iwe chengetedzo yakawanda munzvimbo dzauchazovhura kubva panguva dzino chaidzo.
Makomborero mukushandisa PER
Hapana mubvunzo kuti iyi inoenderana nemusika wemasheya inotakura zvakanakira panguva yekudyara. Imwe yeakanyanya kukosha ndiyo inonzi data rakakosha kana uchiongorora kambani. Chero zvazvingaitika, pamusoro pevamwe izvo kusvika zvino zvinoshandiswa kakawanda pauri. Kune rimwe divi, imwe yemhedzisiro iyo yainogona kuburitsa kubva panguva yekutanga ndeyekuti inogona kukupa yakawedzera kana zvishoma pfungwa yekufungidzira nezve degree re kukoshesa kukosha kana kuwedzeredza yekambani yakanyorwa. Ehezve, izvi zvakakosha zvikuru sezvo ichave imwe yekutanga mafirita usati waita kutenga mumisika yemari.
Ehezve, mamwe emabhenefiti anooneka mukushandisa kwayo anotorwa kubva pakuti kuverenga kwayo kuri nyore uye kunowanikwa kune chero hupfumi hwevatengesi. Kukuvadza kwevamwe iyo inoda zvakanyanya kuomarara masvomhu mashandiro uye kuti iwe unotova nemamwe matambudziko mukuona kwavo kufamba. Uye zvakare, makuru emari kana eruzivo ruzivo mawebhusaiti anowanzoverenga chiyero ichi otomatiki, saka kazhinji hatitombonetseki kuti tiwane. Mumaminetsi mashoma iwe unenge uine iyi yakakosha ruzivo yekushandisa mune yako inotevera mashandiro pamusika wemusika.
Kukanganisa kweiyero iyi
Pane zvinopesana, uye kunyange zvichikushamisa iwe zvishoma, iyo PER zvakare ine akateedzana ezvinetso zvaunofanira kuziva nezvazvo izvozvi. Kutanga, haisi chaiyo inoshanda sisitimu yekuongorora makwikwi emakambani ari muchikamu. Nechikonzero icho chiri nyore kwazvo kunzwisisa uye icho chakavakirwa pamutengo wavo, ivo vanokura zvinoenderana nehupfumi hwekutenderera mavakanyudzwa. Kusvika padanho rekuti iyo PER inogona kukupa iwe imwe yakati yakamonyaniswa dhata yezvokwadi uye inogona kukukanganisa iwe mune zvinangwa zvinodiwa kuburikidza neiyi bhizinesi reshiyo. Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti izvi zviyero zvinogona kuonekwa sevanyajambwa ve kugadzirisa zvinyorwa. Izvo, iyo data haizove yekushandisa kukuru kudzivirira zvaunofarira zvepedyo.
Mukati meichi chikamu, chokwadi chekuti chiyero ichi chinofanirwa kuwedzeredzwa kuburikidza nemamwe manhamba kana ma parameter mune yehunyanzvi ongororo iri zvakare yakakosha. Mupfungwa iyi, haufanire kushandisa chimiro chepamusoro, kure nazvo. Ichi chinhu chawakatopfuura nemuchiitiko chinopfuura chimwe. Neimwe kumwe kusanzwisisana mumitengo yakasarudzwa kubva kuiyi nzira yekudyara. Nekuti pakupera kwezuva haisi nzira isingakundike, sevamwe profiles evashambadzi vadiki nepakati vanogona kutenda. Kunyangwe chero kupi, ndeimwe yeakavimbika kupfuura ako aunenge uripo.
Kukanganisa pakuongorora kwehunyanzvi
Ehezve, iyo PER yakakosha uye madanho echikwereti akakosha zvakafanana.Pane zviyero zvemari zvinotsanangura chimiro chemakambani chaunoda kuongorora. Kunze kwekumwe kwehunyanzvi uye kunyangwe kwakakosha kufunga kwazvinogona kukupa iwe kuti uongorore zviito chinhu chekudzidza kwako. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei uchida kudzamisa kuongorora yemari yemari. Hazvishamise kuti iwe haugone kukanganwa kuti tiri kutaura nezve chimwe chinhu chakakosha sekudyara kwemari yako. Uye neiyi pfungwa, ivo havana kukodzera chero rudzi rwekuvandudza. Kana zvisiri, pane zvinopesana, sarudzo dzako dzinofanirwa kunge dzakavakirwa pakunyatso kuongororodza kweiye chaiwo mamiriro mune zvikamu zvacho panguva iyoyo.
Chekupedzisira, hapana chakakosha kupfuura kuongorora chaizvo izvo zviri PER chikamu mumusika wemusika. Zvakare kana zvishoma kuitira kuti iwe urege kuwana zvimwe zvinoshamisika munzira uye nenzira iyi iwe uri munzvimbo iri nani yekuita kuti zviitwa zvako zviite mari mumisika yemari. Izvo zviri kumagumo ezuva zviri nezvei, sezvo iwe uchatoziva kwazvo. Kwete pasina, iwe unogona kuwana mari yakawanda mune yega yega yemastock oparesheni, asi zvakare ikusiire ma euro mazhinji munzira. Iko kune imwe yezvinangwa zvako ichave yekupa kudzivirirwa kukuru kune ako akavhurika zvinzvimbo pamusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chinonzi PER?
Ndezvipi zvigadzirwa zvesirivheri zvaunogona kuisa mari yako mukati?